Aadaa Hojii Guddisan, Guddatan!! Ob Lammaa keenya maaltu akkana dubbisiisa laata? – Kichuu
[ June 17, 2021 ] Ethiopia Votes, But Balloting Will Not Ease the Country’s Deep Crisis	World
[ June 17, 2021 ] Bilisummaan xumurama! Kan hidhamte haqaaf, haqni hidhaa keessaa oma si baasa!	News
[ June 17, 2021 ] Nuti pitojeektii jabaa of harkaa qabna: Bilisummaa Oromoo.	Videos
[ June 17, 2021 ] NEWS: OROMO LIBERATION ARMY SAYS IT DETAINED TWO AFGHANI EMPLOYEES OF A MINING COMPANY IN WEST WOLLEGA; ZONAL ADMIN REFUTES CLAIMS	World
[ June 17, 2021 ] Oduu Waxabajjii 17,2021|| Tarkaanfiin Facebook Account soba PP irratti fudhate Bilxiginnaa aarsu	Videos
[ June 17, 2021 ] Drought, displacement and disabilities: The challenges facing IDPs with disabilities in Ethiopia and ways forward for more inclusive action	Africa
[ June 17, 2021 ] Ethiopia Urges Tigray Rights Inquiry to ‘Immediately Cease’	Africa
[ June 17, 2021 ] Explainer: Ethiopia’s 2021 Elections	Videos
[ June 17, 2021 ] Ethiopia will show that the world is suspicious that he can conduct peaceful election next week,	Africa
[ June 17, 2021 ] Laamrot Kamaal ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa harka akka hin qabne dubbatte jirtii	Videos
HomeAfaan OromooNewsAadaa Hojii Guddisan, Guddatan!! Ob Lammaa keenya maaltu akkana dubbisiisa laata?
Aadaa Hojii Guddisan, Guddatan!! Ob Lammaa keenya maaltu akkana dubbisiisa laata?
AADAA HOJIIN GUDDISAN, GUDDATAN!!
By Milkii Oromiyaa, Sadaasa 12, 2018, via Dhábasá Wakjira Gemelal
“Ob Lammaa keenya kana maaltu akkana dubbisiisa laata? Akkuma yaadannu, Ob Lammaa kan namuu ifatti arge, bara OPDOn rakkattee gara lixxu dhabde san ture. Bara aangootti dhufee eegalee, abdii ummataa wayyeessuuf haasaa ummata fakkaatu dubbatuu eegale: karaa Foddaa TV dhihaatee rakkina sabaa himuu fi tarreessuu jalqabe. Oromoonis abdii oduun kennamu kana dhagayee gurra laateef…abdii horate.
Oolee bulee, garuu abdiin Ob Lammaa kun oduu bira darbuu dide. Ob Lammaan gaafa gaafa akka Mangee durii ta’uu kajeela. Gaafa Adaamaatti, ‘jaarsoliin keenya biyya hambaatti akka hin duuneef galchine,” jedhes waan qaanessaa dubbate. Kun dhugaa miti. Kijiba adii dha. Darbee darbee waanti isa tuqu, akka jiru argaa jirra. Tarii amala dhokataatu as bahaa jiraa laata? Moo Gadaa isaanii, Gadaa ummatummaatu dhumataa jira?
Lammaffaa, gidduu kana waan isa xuqe hin beeknu, akka tokko ta’aa jira. Mataan naannoo tokkoo maaliif akkas ta’a? Sodaa dha moo? Maaltu isa dheekkamsiisaa jira? Hinaaffaa dha laata? Simannaan ABO kun waan isa aarse fakkaata. Garuu, inni hojii biraa qaba; hojiin simannaa isa hin ilaalaltu; simannaa ABO waliinis wanti walitti isa fidu hin jiru. Hinaaffaa fi sodaa yoo ta’e malee…..
Dheekkamsi kun maal irraa dhufe laata? Tarii, nutu dhibdee isaa isaaf hin hubanne moo, isatu dhibdee keenya nuuf hin huabnne?
Hogganni gaafa ummatatti dheekkamuu eegale, waan mul’isu qaba. Kaan akak yaadanitti, hogganichi yeroo isaa fixachuu agarsiisa. Kaan immoo mallattoo abbaa irrummaa akka ta’etti fudhatu. Kan ob Lammaa kanas maal akka ta’e, bubbullee agarra!
Dhugaan jiru, Oromoon hedduu dha. Oromoof dhiisii, alagaafuu gaachana ta’aa jira. Ummanni miliyoonni 50 ta’u kun dhaabota kudhan hin caalle, hiratee, kaaniin yoo “Leenca,” jedhe, kaaniin yoo “Goota” jedhe, maaltu nama dhukkubsa? Dhugaa dha, namni tokko hundumaan yoo “Goota” jedhe, rakkoo ta’uu mala. Garuu, akka argaa jirrutti, kan OPDOn Leenca, jedhe, ABOn Leenca jechaa hin jiru. Kan Ob Lammaan Goota jedhe, Ob Baqqalaa Garbaan “Leenca” waan jedhe natti hin fakkaatu.
Amma egaa, Sodaan hin jiru taanaan, waanti nama dheekkamsiisu waan jiraatuuf hin qabu; hinaaffaan hin jiru taanaan, waanti nama dheekkamsiisu waan jiraatuuf hin jiru; dirqamaa fi gaafatama ofii bahachuun, qaamota hunda irraa eegama.
Akka mataa bulchiinsa naannnootti immoo haasaa fi dubbii irraa gara hojiitti seenuun barbaachisaa dha. Mariin dhibdee hiikkachuunis aadaa ta’uu qaba; miidiyaa of-harkaa qabanitti fiiganii wacuun xiqqaachuu qaba. Oduun Miidiyaan darbu iddoo hundatti hojjachuu dhiisuu mala. Yeroo garii, kan miidiyaan haasofnu caala kan walitti dhufnee mariin hiikkannutu faayidaa qaba. Yeroo ulfaataa fi hamtuu keessatti ofii ibidda qabsiisaa, ofii gaazii itti naqaa qabbana argachuu hin dandeenyu. Mataan bulchiinsa naannoo tokkoo, warra kaan caala, Gaafatama guddaa fi addaa qaba. Kun dagatamuu hin qabu; aadaa hojii guddisuun, dursa mataa mootummaa Oromiyaa irara eegala. Ofii odeessaa, nama biraa hojjachiisuuf yaaluun hin milkaa’u; ofii fakkeenya ta’uun dursuu qaba.
Oromiyaan kan hunda keenyaa ti; kan bara baraan itti hafu hin jiru; walgargaarree, haa guddfnu; nageenya Oromiyaafi bakak jirrutti waardiyaya haa dhaabbannu!! Marti keenya aadaa oduu guddisuun jijjiramne lubbuu qabu fiduu hin dandeenyu; kanaaf, marti keenya, aadaa hojii haa guddifnu!!
Hojii, amma illee hojii!!”
GABRA AND BORANA BURRY THE HATCHET AT KUBI EL FATU CULTURAL FESTIVAL MOYALE
A year in fake news in Africa-ESA is among them.
NEWS: OROMO LIBERATION ARMY SAYS IT DETAINED TWO AFGHANI EMPLOYEES OF A MINING COMPANY IN WEST WOLLEGA; ZONAL ADMIN REFUTES CLAIMS
Oduu Waxabajjii 17,2021|| Tarkaanfiin Facebook Account soba PP irratti fudhate Bilxiginnaa aarsu
Explainer: Ethiopia’s 2021 Elections
Ethiopia will show that the world is suspicious that he can conduct peaceful election next week,
Laamrot Kamaal ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa harka akka hin qabne dubbatte jirtii
The OLA continued training Oromos Qeerroo & Qarree those who played role in changing the situation of Ethiopia horn Africa politics during TPLF leads EPRDF
Ethiopia’s Rocky Transitional Election